Steve Jobs, waxaan ka fekereynaa biopic cusub Steve Jobs | Wararka IPhone
Steve Jobs, waxaan ka fekereynaa biopic cusub Steve Jobs [No spoiler]
Biopic-ka cusub ee nolosha Steve Jobs, oo ka mid ah kuwa badan, wuxuu ka yimid gacanta Universal, iyadoo Danny Boyle uu amar ku bixinayo qoraalka Aaron Sorkin, oo ku saleysan taariikh nololeedka uu qoray Walter Isaacson. In kasta oo dhaleeceeyayaashu ay si aad ah ugu wanaagsanaayeen shaqadan Steve Jobs (run ahaantii in ka badan kuwa kale), ma aysan helin soo dhaweynta dadweynaha ee tiyaatarada Mareykanka oo dhan ee ay filayeen Universal. Maalintii koowaad ee sanadkaan 2016, filimkaan wuxuu yimid tiyaatarada Isbaanishka, sidee buu uga yaraan karaa, qeyb weyn oo kamid ah kooxda iPhone-ka ee Actualidad ayaa u daawasho tagay. Haddii aad ka shakisan tahay filimkan, iyo haddii uu u qalmo iyo in kale inuu u aado shineemada (iyadoo la tixgelinayo qiimayaasha horay loo qabtay), waxaan rabaa inaan ku caawiyo, Hore u soco, aan eegno filimkii ugu dambeeyay ee Steve Jobs.
In kasta oo aanan u tixgelin naftayda sidii shaneemo sybarite, maxaa yeelay aniga ahaan shaneemadu aad ayey iila muuqataa, waa inaan dhahaa waxaan ahay macaamiil balwad badan, ballamadayda laba-toddobaadlaha ah ee tiyaatarada filimku waa lama-huraan, maktabaddayda fasallada fasalka ayaan lumiyay isaga oo muddo fog ka hor. Laakiin taasi igama dhigeyso inaan ka xirfad badnaado mid kasta oo idinka mid ah oo akhristayaal ah, sidaa darteed ra'yigeyga ku saabsan arrintan ayaa ka khuseeya mid kasta, taasi waa sababta waxaan sameyn doonnaa layli isgaarsiineed oo muhiim ah, waxaan codsanayaa in markaan aqrino ra'yigayga inaan dhamaanteen dhex marno sanduuqa faallooyinka inaan kugula talinno sida ugu fiican ee aan ognahay (ama aan kugula talin) filimkaan, markasta oo laga reebo kuwa qaswadayaasha ah.
1 Dhaleeceynta gaarka ah
2 Horumarka filimka
3 Ma u baahanahay inaan wax badan ka ogaado Apple iyo Jobs si aan u arko filimka?
Dhaleeceynta gaarka ah
Filimku maahan abaalmarin iyo magacaabis, laakiin tani waxay leedahay dambi cad. Mr. Michael Fassbender wuxuu ciyaaraa nacas aan cid kale samayn lahayn. Waxay horeyba ugu tijaabiyeen jilaayaasha sida Aston Kutcher, oo siiyay macallinka Apple muuqaal muuqaal ah. Doorka jilaaga waa mid cajiib ah, wuxuu ku guuleystey inuu ku dhex milmo shaqooyin aan cid kale qaban ilaa iyo hada, oo ay la socoto fasiraada cajiibka ah ee Kate Winslet, oo u ciyaareysa Joanna Hoffman sida qofna uusan u ogeyn sida loo sameeyo, iyada iyada la siinayo doorka taariikhda, door ka badan intii loo qalmay, dhab ahaan, daqiiqado badan xitaa waxay maamushaa inay ka sarreyso Fassbender (Jobs) laftiisa.
Isla sidaas looma dhihi karo Seth Rogen, oo ciyaaraya xasillooni la'aan, aan hadal lahayn, oo inta badan meesha ka baxsan Wozniak oo ka yar jilaa dheeri ah. Waxay u egtahay wax la yaab leh markaan ogaanay in Wozniak ay si firfircoon uga wada shaqeysay filimka, laga yaabee taasi waa calaamadda in Seth Rogen uu miisaankiisu aad uga hooseeyo Wozniak ...
Haddii aad il bilqadho, waad u xiistay, sida uu oran lahaa halyeeygii weynaa ee Antonio Lobato. Filimku wuu ku qabsaday, wuxuu kaa qabanayaa daqiiqad kow, markii ay u muuqato dabacsanaan, fowdadii had iyo jeer cakiran Shaqooyinka ayaa soo muuqata, jilayaasha iyo wixii ka sarreeya Fassbender waxay yaqaanaan sida loo fasirto shakhsiyadda dabiiciga ah ee Steve Jobs ee fartiisa, waxaa moodaa inaan nahay isaga oo ka daawanaya nolosha cusub.
Steve Jobs ma uusan dooneynin in loo muujiyo inuu yahay qof neceb, in kastoo ay badanaa u muuqan karto sidaas, Fassbender wuxuu u fiirsanayaa xad la'aan iyo hakadka joogtada ah iyo isbeddelada mowduucyada waxay siinayaan kalsooni wanaagsan in Steve uu ahaa qof leh dhibaatooyin saameyn iyo shucuur leh oo uu doonayay inuu ku qariyo shakhsiyadiisa adag, iyo in kaliya Fassbender ayaa awooday inuu fasiro, gacanta gacanta ku haysa Danny Boyle, dabcan. Marka laga hadlayo dib u dhigista Castilian, shaki la'aan inay mar labaad si dhab ah ugu dembaabaan Wozniak, cod aan la soo koobi karin oo aan macquul ahayn oo mararka qaar naga dhiga inaan necbahay xitaa dabeecadda. Inta kale, Kate Winslet waa atariisho caan ah oo aan ku daalnay inaan aragno, sidaa darteed codkeedu wuxuu noogu muuqan doonaa mid aan aqoon u leenahay, kan shaqooyinka sidoo kale waa la dhammeeyay.
Ma u baahanahay inaan wax badan ka ogaado Apple iyo Jobs si aan u arko filimka?
Jawaabta ganacsigu waa maya, laakiin jawaabtayda daacadda ahi waxay tahay inay xiiso weyn ii leedahay in horay loo sii daawado filimada qaarkood, sida "Burcad badeedda Dooxada Silicon », looma baahna ama looma baahna, laakiin filimkan ayaa leh saddex ficil oo waaweyn, "Apple Lisa II", "NEXT" iyo "Apple iMac / iPod", Marka, in kasta oo dib-u-eegis si fiican loo qabtay oo gacan ka geysanaya in la raaco dunta, haddana waxa jiri kara waxyaabo badan oo aanad garanayn haddii aadan akhriyin taariikh-nololeedka Walter Isaacson, sida kuwa caanka ah “haddii aan aniga ahayn wali waad iibin laheyd biyaha sonkorta "Ama" kuwa duula fasalka dhaqaalaha iyo kuwa duuliya fasalka koowaad isla waqtigaas ", kuwa caadiga ah Steve Jobs goofs ayaa dhoola cadeynaya kuwa naga mid ah ee sida dhow ula socday taariikh nololeedkiisa oo aan laga dareemi karin celcelis ahaan daawadayaasha.
Si kastaba ha noqotee, waa inaan sheegaa in dhammaantood ay u muuqdeen kuwo liita ama aan dhammaystirnayn, marka laga reebo Burcad badeedda Silicon Valley, waxaanan aaday balanteydii filimkaan rajo yar, laakiin waa inaan dhahaa inkasta oo aysan isbarbardhigi karin, hadana mahan xafiiltan, waa filimo kaladuwan, marka anigu midba kan kale hortiisa ma dhigi doono, labaduba way istaahilaan in la arko, mana garanayo inay luminayso taageere Apple ah. Marka, haddii aad wax badan ka jeceshahay Apple ama aad aqoon badan u leedahay taariikhda shirkadda iyo Steve Jobs, horay u sii soco, waad jeclaan doontaa. Haddii tani aysan ahayn kiiska, waxaad u badan tahay inaad sidoo kale jeceshahay, runtiina waxay kugu kicin kartaa xiisaha adiga. Adiguna akhristayaal maxaad u malayn?
Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan idinkaga tegayaa fikirka dhaliisha The New York Times, O. Scott, oo si fiican u qeexaya:
Waa madadaalo cabsi leh iyo madadaalo maskaxeed, caqabad xoog leh ku ah heshiisyada caajiska ah ee sheekada Hollywood, iyo xaflad loogu talagalay aqoonyahannada tarjumaadda filimka casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Waqtiyada firaaqada » Steve Jobs, waxaan ka fekereynaa biopic cusub Steve Jobs [No spoiler]
Waxaan ku jiray Falanqeyn Sneak ah waxaanan si lama filaan ah u helay (mar hore ayaan lahaa ujeedo ah inaan arko) Waxa aan ku dhihi karo mowduuc ahaan waa runti inay xoogaa i caajisay. Iyo waxa aan si macquul ah u dhihi karo ayaa ah inay jiraan dad ka baxay qolka iyagoon dhamaan oo codbixinta dhamaadka (hareeraha halkan tigidhada waxaa badanaa lagu xareeyaa mid ka mid ah sanduuqyada dhibic ahaan) waxay noqotay mid aad u xun. Aqlabiyaddu waxay yiraahdeen iyagu waa jaangooyaan oo kuma talinayaan waxaana jiray dad yar oo codkooda uga tagay khaanadda nacasnimada leh. Waxaan u maleynayaa inaysan midkoodna fiicnayn.
Waxaan rabaa inaan ku arko xiisaha, laakiin mar hore ayay i cabsiisay. Aniga ahaan midka fiican waa "burcad badeedda Silicon Valley", in kastoo taasi ay sabab u tahay waxa ay muujineyso, maahan tarjumaad darteed. Kutcher's waan jeclaa fasiraadda, laakiin waxyaabo muhiim ah ayaa ka maqan. Tan dambe, haddii aysan dhigin waxyaabo muhiim ah oo aysan jirin fasiraad wanaagsan ... Waan fahamsanahay dhaliisha.
Way igu cusleyd aniga xitaa.
Dad badan oo u taga si ay u daawadaan waxay rabaan inay daawadaan filim ku saabsan Shaqooyinka iyo ku saabsan Apple (taasina waa kaliya Shaqooyinka iyo waqti cayiman)
Ku saabsan Wozniak sidoo kale waxaan u maleynayaa inay fiicantahay laakiin waxaan jeclaaday Kate Winslet wax badan.
Kuma talinayo, waa fekerkeyga shaqsiyeed.
Ku jawaab Benny
Cumar barrera dijo
Anigu waxaan ahay qof jecel Shaqooyinka, aadna waan u dhaleeceynayaa markaan wax ka arko isaga, oo taxaddar, waxaan rabaa inaan caddeeyo inaanan ahayn fanboy, waan ogahay wanaagga iyo cilladaha Shaqooyinka, laakiin haye, aan dhinac iska dhigno mahadsanidiin isaga aan u hayo, kaalay filimka, waxaan qolka u imid waxoogaa shaki ah, ma aanan ogeyn waxa laga filan karo maxaa yeelay waxaan aqriyay dib u eegis wanaagsan iyo mid xunba, intaas waxaa sii dheer, sida aan ku leenahay Mexico, bar wuxuu ahaa mid aad u sareeya, maxaa yeelay waxaan aqriyay buugaag qaarkood oo kusaabsan Shaqooyinka, waan ogahay sifiican sheekadiisa iyo waliba tixraaca ugufiican ee uu kujiro isaga oo kujira filim kaas oo ah Burcad Badeedda Silicon Valley, sifiican, markii ay bilaabatay, waqtigaan aaminsanahay waxay ugu dambayntii dabooli doontaa wixii had iyo jeer la daboolay, iyada oo aan laga bilaabin waqtigii halyeeyada ee garaashka haddii aan dambe (haa, waxaan isku dayaa inaan ka fogaado qaswade), runtu way niyad jabtay, filimku wuxuu iila muuqdaa sidii hal-ku-dheg dheer diirada saaray dhinac kaliya oo noloshiisa ah, xitaa gabi ahaanba ilaaway dhinacyo kale oo qofkiisa ah, in kastoo la isku dayay in la arko in ka badan qofka e Caqliga, dhammaan adoo diiradda saaraya hal shay ayaa naga hor istaagaya inaan si dhab ah ula kulanno Shaqooyinka, marka lagu daro, oo aan horay uga xumahay qaswade yar oo aan sameyn doono, kuma dhicin inuu ka gudbo waqtiga la daaweeyay inta hartay Filimada Ahaanshaha filim ku saleysan buug sidan u buuran oo taariikhi ah, hanad iyo qofba, sida Walter Issacson, filimku aad buu u gaaban yahay, sidoo kale khaladaad muuqda oo muuqda, waxaan ku siinayaa 4 ka mid ah 10kiiba, sida oo kale Malaha filimka ma xuma, bandhigyadu way fiican yihiin, laakiin waxay daboolayaan wax yar oo ka mid ah Shaqooyinka shaqsi ahaan, wax caqli-gal ah, sida hoos u dhac ku yimid noloshiisa, oo ku saleysan encyclopedia, marka si loo hadlo, waa mid aad u gaaban, waxay ku habboon tahay Xusuusnow Waxaan kaqeyb galay shaleemada oo ay ila socdaan labo qof, oo aniga aniga aniga igala aqoon, oo aan aqoon u laheyn taariikhda ama shaqooyinka, waxbadanna ka yar Apple, filimka wey jeclaayeen, marka waxaan u maleynayaa dadka aan aqoonta laheyn, waa filim fiican, laakiin kuwa sida dhow ula socda Apple iyo Jobs , Waxaan ogaaday in dhaleeceyntu aysan aheyn mid aad ufiican, waxay lamid tahay isku dayga inaad filim ka sameyso Bill Gates, adoon kahadlin tikniyoolajiyadda, iyo inaad diirada saarto wax walba waqtiga dacwadda ladagaalanka hanti goosadka
Ku jawaab Cumar Barrera
Shalay waxaan ugu danbeyntii daawaday filimka, marka la soo koobo, waxaan ka helay kan koowaad wax ka badan kan, waa mid aad u yar oo faahfaahsan, dhacdooyinka ayaa ka horreeya oo keliya Keynotes, faahfaahin aad u yar, wax walba waxay ahaayeen soo koobid, runti maahan wax u baro sida ugu badan ee sheekada runta ah waana tan la soo dhaafay Steve Jobs ee maxay ahayd xaqiiqadiisa
Waan ku raacsanahay Cumar, si gaar ah ayaan u niyad jabay. Ma fahmin sababta oo leh dabeecad sidan u muhiim ah, oo sheekooyin badan leh, waxay u isticmaalaan inay noqdaan xargaha ugu weyn ee filimka dhacdo aan loogu talagalin Steve Jobs. Waxay la mid tahay sameynta filimka Leonardo Da Vinci oo diiradda la saarayo meeshii uu ku iibsaday burushyada.
Dhinaca kale, filimkii ugu horreeyay, ee Aston Kutcher, waxaan u xiisay dhacdooyin muhiim u ahaa taariikhda Apple, Shaqooyinka iyo guud ahaan teknolojiyadda. Tanna, in kasta oo suulasha ay aad u badan yihiin, haddana way muuqdaan. Waxaan ula jeedaa, tusaale ahaan, booqashada Xerox Park ama goobta dhabta ah ee dhalanrog.
Marka la soo koobo, waan ka xumahay waxa, waxaan ka baqayaa, inuu noqdo filimkii ugu dambeeyay ee laga hadlayo qof dad aad u tiro badan, oo aan ku jiro, ay u bogaan.
Palm Pre, oo noqon kara xafiiltanka iPhone 7 sano ka hor
Cusboonaysiinta cusub ee Khariidadaha Google ee loogu talagalay macruufka ayaa yimid